Raha nandre izany ilay rafozam-bavy dia mba te hamotopototra inona marina no saika tian’ny pasitera hatao tamin'ity vinantovaviny ity ka nampilaza tany amin'ny mpiara-mivavaka dia ireo lohandoham-pisorona tao.
Nihitatra ny raharaha ny Talata, ampitson’io, ka lasa tany amin'ny Fokontany. Niezaka ny lehiben’ny Fokontany nampiantso an’ny Pasitera mba hahitana ny marina.
Nihitatra hatrany ny raharaha satria nitsoaka ilay Pasitera ka tsy misy mpiandry intsony ny zanak'ondry amin'izao.
Nandray andraikitra ny fiangonana foibe eto Sambava ary tamin’io fotoana nitsoahan’ny pasitera io ihany dia efa nandefa iraka nankany an-toerana no sady nanendry pasitera vonjimaika, ary efa nisy ihany koa ny fifanatonana teo amin'ilay reny malemy sy ny fianakaviana araka ny nambaran’ny pasitera iray avy amin'ny foibe Sambava.
Fa efa fantatra ankehitriny any ambanivohitra antsoina hoe : Manakana Lokoho ilay pasitera saika hametaveta vehivavy io. Inona ny fepetra horaisin’ny foibe aminy : mbola hotazomina ho pasitera ihany fa hafindra toerana sa izy mihitsy ny hisafidy ny hijanona.